Maxay yihiin siyaabaha loo abuurayo taraafikada soo saarida e-commerce backlists?
Marka dhammaan farsamooyinka naqshadaynta raadinta si haboon loo hirgeliyo boggaaga, waxay kaa caawin doontaa ganacsigaaga sare inuu ka sarreeyo bogga natiijada raadinta iyo keeno socod joogto ah oo socodka taraafikada. Waxay ka dhigaysaa xawaareynta raadinta raadinta si aad u qiimo badan oo loogu talagalay bogagga internetka. Haddii la sameeyo kakan oo leh suuq-geynta warbaahinta bulshada, suuq-geynta email-ka, iyo ololayaasha kale ee wax-soo-saarka, waxay ka dhigaysaa wax barashada internetka.
SEO-ga qaabkiisa asaasiga ah waxaa loo qaybin karaa qaab-dib-u-eegis iyo bog-bog. Hagaajinta bogga waxaa loola jeedaa dhammaan farsamooyinka goobta-u adeega si loo hagaajiyo waayo-aragnimo userka leh ilahaaga internetka. Waxaa intaa dheer, waxay u adeegtaa si ay u caawiso farsamooyinka raadinta si ay u fahmaan waxa ay boggagaaga ku saabsan tahay in ay u oggolaadaan inay u muujiyaan su'aal ku haboon user. Hagaajinta barta-ka-baxsan waxay u adeegtaa samaynta mashiinnada goob-raadinta si toos ah boggaaga internetka sida ugu haboon ee su'aalaha user. Qeybta ugu muhiimsan ee tan waxay ka timaaddaa dhabarka. Waxaad u baahan tahay inaad dib u hesho tayada tiknoolajiyada ilaha webka ee kale ee la xidhiidha si aad boggaaga u aragto dhagaystayaasha aad u xiisaha badan.
Backlinks muddadoodu waxay u qaybsamaan dofollow iyo nofollow. Backlinks Backofs waa kuwa ku kordhiya boggaaga SEO. Xiriirada noocaan ah waxay u adeegaan sida codadka laga helo ilo kale.
Haddii kale, backlinks backlinks waa xiriiro marka qof uu siinayo gadaal uuna u wareejin wax qiimo leh. Si aad u sameysid isku xirnaanta nofollow, qoraagu wuxuu u baahan yahay inuu ku daro qoraalka dheeraadka ah ee HTML ee xiriirka. Hubinta lambarka HTML, waxaad kaloo sheegi kartaa in isku xirku yahay mid raacsan ama nofollow. Tusaale ahaan, xaddiga ugu weyn ee isku xirnaanta YouTube, Facebook, blogska iyo forumyada ayaa had iyo goorba nofollow. Weli wali waa ku fiican tahay awoodaada caanka ah, laakiin kuma siin kartid wax horumarin ah oo ku saabsan qiimeynta mashiinka raadinta.
Sidee loo go'aamiyaa qiimaha xiriirrada soo galaya?
Waxaa jira dhowr arrimood oo muhiim ah oo loo baahan yahay in la tixgeliyo si loo qiimeeyo qiimaha iyo saameynta dhabarka.
Xiriiro dibedda ah oo ka yimaada goobo tayadoodu sarayso ayaa ka faa'iideysanaya bogsashada shabakadda marka loo eego kuwa ka soo jeeda meelo aan ku habooneyn oo tayo hooseeya;
Xidhiidhada ka yimaada domaanyo gaar ah waxay qiimo ka helayaan boggagaaga inta aan la xiriirin boggaga hore ee adiga kugu xidhiidhin lahaa;
Xidhiidhka xiriirinta mowduucyada waxaa aqbalaya kuwa isticmaala si ka wanaagsan kuwa mowduucyada la xiriira;
Xidhiidhada qoraallada qoraalka ah ee la xidhiidha oo la filayo waxay ka gudbaan qiimaha muhiimka ah ee muhiimka ah, gaar ahaan haddii ay u eg yihiin magacaaga caanka ah.
Sidee loo abuuraa gaadiidka dib u soo celinta?
Abuuri nuxur kaas oo lala wadaagi doono dadka isticmaala
Habka ugu fudud ee lagu heli karo biilka dib-u-habeeynta badeecadaada e-macaamiisha waa inuu abuuro shey weyn oo ku qoran qoraalka, video ama foomka codka ee dadka isticmaala ay wadaagaan rabitaankooda.
U samee dib u eegidaada alaabtaada
Farsamaynta dhisme kale oo fudud oo faa'iido leh ayaa ah in la gaaro boogaha si loo abuuro dib u eegis wanaagsan ee alaabtaada. Waxay si dabiici ah u gali doontaa isku xirka boggaaga Source .